”Good Trouble” စီးရီးမှာ ပြန်တွေ့ရဦးမယ့် မင်းသားချောလေး Noah Centineo – Trend.com.mm
”Good Trouble” စီးရီးမှာ ပြန်တွေ့ရဦးမယ့် မင်းသားချောလေး Noah Centineo
Posted on January 10, 2019 January 10, 2019 by Wint
၂ဝ၁၈က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ” To All The Boy I’ve Love Before” နဲ့ ” Sierra Burgess isaLoser” မှာမိန်ကလေးပရိတ်သတ်တွေ အာရုံကိုဖမ်းစားခဲ့တဲ့ sexy မင်းသားချော Noah Centineo ကို အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် ”Good Trouble” တီဗီစီးရီးမှာ လည်း ပြန်လည်တွေ့ရှိရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Noah Centineo ဟာ အသက် ၁၁နှစ်တည်းက အနုပညာလောကထဲမှာ ကျင်လည်လာခဲ့သြူုဖစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၃ခုနှစ်က အမေရိကန် မိသားစုဒရာမာ တီဗီစီးရီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ” Foster” မှာ ပထမဆုံး စတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၂နှစ်သာရှိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ ဒီ့ထက်ပိုတိုးတက်ဦးမှာပါ။
@NCentineo bringing you your daily reminder that #GoodTrouble premieres Tuesday, January 8th at 8/7c on @Freeform. ________________ Don’t disappoint #NoahCentineo.
A post shared by Good Trouble (@goodtrouble) on Dec 17, 2018 at 4:20pm PST
အခုလည်း ”Good Trouble” စီးရီးထဲက သူ့ရဲ့sexy ကျတဲ့ပုံရိပ်အချို့  အင်စတာဂရမ်မှာပျံ့နှံ့နေ
Before returning to Lara Jean in the #ToAllTheBoysIveLovedBefore sequel, the Internet's boyfriend #NoahCentineo is makingastop in LA for some #GoodTrouble. Takealook at Jesus' return to #TheFosters spinoff then click the link in our bio for more information about his appearance. 📷: Freeform
A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) on Jan 4, 2019 at 3:37pm PST
”Good Trouble” စီးရီးဟာ အမေရိကန် ဒရာမာစီးရီးဖြစ်ပြီး season ၁၃ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက Maia Michell, Cieraa Ramirez, Zuri Adele, Sherry Cola , Tommy Martinez တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Noah Centineo က special guest အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
” Good Trouble” စီးရီးက ပြီးခဲ့တဲ့ ၈ရက်နေ့ကပဲ ထွက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Trailer ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးသူများအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အလှအပအတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အသုံးဝင်နေတဲ့ Lavender ပန်းအဆီ